Zimbabwe: Zim, USA Escalate Diplomatic Tiff - allAfrica.com
Zimbabwe: Zim, USA Escalate Diplomatic Tiff
Zimbabwe and the United States of America have been tangled in diplomatic warfare following remarks by Robert O'Brien, National Security Advisor to President Donald Trump that Zimbabwe, along with China and Russia had a hand in the protests that were triggered by the killing of a black man, George Floyd, by a police officer in the city of Minneapolis last week.
"Zimbabwe is not and never has been an adversary to the United States of America. I informed the Ambassador that Zimbabwe seeks normal, cooperative relationship with the USA based on mutual understanding, mutual respect and non-interference in each other's internal affairs, the very opposite of the characterisation voiced by Mr O'Brian," said Moyo
"Whereas we certainly add our voice to the many others including that of African Union and the United Nations who expressed their deep concern at the killing by a uniformed white official of Mr George Floyd, an unarmed, handcuffed, helpless black man, we unreservedly condemn the violence, arson and looting which have turned usually quiet neighbourhoods into scenes of chaos and destruction and where, tragically, further innocent lives have been lost" Minister Moyo further stated.
He reminded Washington of the "harsh criticism" it had given to Harare in relation to the latter's response to opposition political formations, its automatic presumption of state capture and assumptions of institutionalised disregard for human rights or rule of law, saying these reflect double standards on U.S policy towards Zimbabwe.
"We recall their automatic presumption of state culpability in instances of the alleged abduction and their assumption of an institutionalised disregard for human rights or rule of law within our Government, and we reflect on the lack of balance and even the double standards so evident in US policy towards Zimbabwe," Moyo said.
"I urge Zimbabwe's government to end state-sponsored violence against peaceful protestors, civil society, labour leaders and members of the opposition in Zimbabwe, and to hold accountable those responsible for human rights abuses," said Nichols.
"Mr Floyd's murder was a tragedy that has filled Americans with horror and anger. Mr Floyd's Killer was charged with murder in days. Every American official from our President to Minnepolis'African American police Chief Medaria Arradondo has vowed to deliver justice. Zimbabweans surely wonder when, after so many years, Patrick Nabanyama, Itai Dzamara and Paul Chizuze will get justice," Ambassador Nichols charged.